Yekutsvaga nyowani yebrowser inovhara chero mawebhusaiti anoshandisa Google, Facebook, Microsoft, kana Amazon
Muri pano: musha / Technology News / Yekutsvaga nyowani yebrowser inovhara chero mawebhusaiti anoshandisa Google, Facebook, Microsoft, kana Amazon
Iyo Economic Security Project iri kuyedza kuita poindi nezve makuru tech monopolies nekuburitsa browser browser iyo ichavharira chero masiti anosvika kune IP kero dzeGoogle, Facebook, Microsoft, kana Amazon. Kuwedzerwa kunodaidzwa Big Tech Detective, uye mushure mekushandisa internet nayo kwezuva (kana, zvakanyatso, kuyedza uye kutadza kushandisa), ndingangoti zvinodzosera kumba iyo pfungwa yekuti hazviite kudzivirira makambani aya pawebhu yazvino, kunyangwe iwe ukaedza .
Parizvino, iyo app inofanirwa kuve yakatakurirwa padivi paChannel, uye iyo Economic Security Project inotarisira kuti izvo zvicharamba zviri izvo. Zvakare inowanikwa kudivi-mutoro kuFirefox. Nekukanganisa, zvinongoteedzera kuti zvikumbiro zvingani zvinotumirwa, uye kumakambani api. Kana iwe ukagadzirisa iyo yekuwedzera kuti unyatsovhara mawebhusaiti, iwe uchaona yakakura tsvuku popup kana iyo webhusaiti yauri kushanyira inotumira chikumbiro kune chero eana. Popup iyoyo inosanganisirawo rondedzero yezvikumbiro zvese kuti ugone kuwana zano rekuti chii chiri kukumbirwa.
Izvo zvakakodzera kuti urambe uchifunga kuti nekuda kwekuti saiti inosvika kune imwe kana anopfuura emakambani makuru mana ehunyanzvi, hazvireve kuti zviri kuita zvekutamba kana kuita chimwe chinhu chisina kunaka. Mazhinji mawebhusaiti anoshandisa mafonti kubva kuGoogle Mafonti, kana kubata avo masosi vachishandisa Amazon Web Services kana Microsoft Azure. Izvo zvakati, kune mapeji anobatana neayo ma IP kero nekuti ivo vanoshandisa matracker anopihwa neimwe yekambani hombe ina. Iyo mienzaniso yandiri kuda kunyora yakasarudzwa nekuti iwo akajairwa masosi, kwete hazvo nekuti ivo vanofanirwa kunyadziswa.
Kunyangwe ini ndisiri kushandisa Google, ini ndichiri kuona iyo pop up.
Screenshot: vava kuda
Ndakaona popup yakawanda. DuckDuckGo uye Fastmail, dzakakurumbira dzisiri-Google dzimwe nzira dzekutsvaga neemail, dzese dzakavharwa nekuti dzakatakura zviwanikwa kubva kuGoogle, uye DuckDuckGo yakatakurawo zvinhu kubva kuMicrosoft (kwete kuti izvi zvaishamisa, zvichipiwa izvozvo ma ads enjini yekutsvaga anobva kwairi). Muchokwadi, dzinenge dzese injini dzekutsvaga dzandaifunga nezvadzo dzakavharwa: Microsoft's Bing, zviripachena, asi zvakare Yahoo, Startpage, Ecosia, uye kunyange Ask.com. vava kuda yakavharwa zvakare, sezvo ichitakura zviwanikwa kubva kuAmazon, Google, uye Facebook.
Dai ndanga ndichiedza kushandisa dandemutande ndisingakwanise kubatanidza kune ma IP kero ane makuru mana, zvaizoita kuti basa rangu rinyanye kuoma: kwete chete ini ndaisakwanisa kutsvaga ruzivo, kwete chete nzvimbo dzese dzenhau dzandaigona kufunga kuedza yakauyawo yakavharika - kunyangwe iyo yebepa rangu remuno.
Kana ini ndisingakwanise kushanda, ko zvakadii nezvevaraidzo? Izvo zvinogona kuve zvinonyengera futi. Google zviri pachena ndeyaYouTube, asi Netflix, Hulu, Floatplane, Mangadex, uye kunyange Vimeo zvakare vakaratidza hombe tsvuku yekuvharira screen neruremekedzo rweBig Tech Detective yekuwedzera. Yakanga iriyo nyaya imwechete nekutenga pamhepo, seEtsy inotakura zviwanikwa kubva kumakambani mana. Uye kana ichi chiwedzero chikandiita kuti ndide kungodzika internet uye kuenda kusango? Iyo Hiking Project neAllTrails zvakare yakarasika kublock.
Kuedza kutyaira poindi yekumba kuti kutora kubva pakuwedzeredzwa uku kunofanirwa kuve kwakanyanya mumitsara ye "iyo internet yese inovimba nemakambani mana" uye kwete "webhusaiti yega yega iri kunditevera," ndakaedza kuenda kune webhusaiti yandakabatsira build uye izvo zvandinoziva hazvisi kuita chero chinhu chinotyisa kana kutoratidza kushambadza. Yakanga yakavharwa nekuti inogarwa paAWS uye inoshandisa mafonti kubva kuGoogle.
Tarisa izvo zvandakaita sezvakaita kumukomana wangu, ndisingatombozviziva.
Ehezve, kana browser rekuwedzera ringaudza kuti vateereri varipo, zvinoitawo kuvadzivirira. Pane akawedzeredzwa mashoma anowanikwa anoita kudaro, uye ndakamboshandisa imwe inonzi NoScript munguva yakapfuura. Nekudaro, chiito chekuyera pakati pekuvharira zvinhu zvausingade, uyezve kusaputsa saiti iwe yauri kuyedza kushanyira - kubata nemasaiti akaputsika nekuda kwemasisitimu akaomesesa ndicho chikonzero ndakatsigira kuedza izvozvo.
Big Tech Detective haina kuitirwa kuchengetedza yako data yakavanzika kubva kumakambani aya - inototaura kana ichivhara rimwe remapeji kuti haisi kunyatso kudzivirira zviwanikwa kutakura, kana kuunganidza data rako kana chiri icho chinangwa chavo. Izvo chaizvo zvinorehwa seyekuona chishandiso kukuratidza iwe kuti kana iwe uchida kushandisa internet usingavimbe nemakambani aya, hausi kuzove nenguva yakanaka. Izvo zvinoita, zvisinei, zvinorega iwe uchitangazve kuedza Gizmodo ran uko mumwe wevanyori vayo akaedza kucheka iwo mamwe ma tech makambani uye Apple - uye humwe hunyanzvi kubva kune iro basa hunobatsira kusimbisa uku kuwedzerwa.
Ah, uye kana iwe uchinetseka kana ini ndawana chero masosi asina kuvharika, mhinduro ndeyokuti hongu, neimwe nzira, iyo iCloud saiti inoita kunge iri kushanda mushe. Zvisinei, webhusaiti yeApple yakakodzera haina - yakaita zvikumbiro kuAmazon.
Zvinogona kuti kuvimba kwewebhu paGoogle, Facebook, Microsoft uye Amazon zvinogona kuchinja. Ino webhusaiti yakajeka webhusaiti inogara iri yangu yekuenda-ku apo ini ndoda kuzviyeuchidza ini kuti iyo yazvino webhu rakasiyana kwazvo neyaimbove iri.
Filed Under: Technology News Tagged With: Kuwedzera kweBhurawuza, Facebook, Google, Google Chrome, Plug-in (komputa)